Fumana i-Studio yokurenta eColchester, i-Essex kulwazi lwangempela lwe-WW
Fumana iStudiyo yokurenta eColchester, Essex
Irenti inokubhekisa ku:
Isitudiyo ngumculi okanye kwigumbi lokusebenzela labasebenzi. Oku kunokuba ngeenjongo zokudlala, ukuzoba uyilo, ukupeyinta, ukupeyinta (i-ceramics), ukukrola, imvelaphi, ukwenziwa kweenkuni, ukukrola, ukufota, uyilo lwegraphic, ukwenziwa kweefilimu, ukwenziwa kwemifanekiso, uyilo lwamashishini, unomathotholo okanye ukuvelisa umabonakude okanye ukusasaza umculo. Eli gama likwasetyenziswa kwigumbi lokusebenzela labadanisi, elihlala lichazwa njengomdaniso we studio. Isitudiyo samagama sithathwe kwiNtaliyane: studio, ukusuka kwisiLatin: studio, ukusuka ku-studio, intsingiselo yokufunda okanye inzondelelo. Isigama sesiFrentshi sesitudiyo, i-atelier, ukongeza uyilo lwesitudiyo somculi sisetyenziselwa ukwenza uphawu lwe studio yomyili wefashoni. I-Atelier ikwanayo ukuba yindlu ye-alchemist okanye yewizard. Isitudiyo ikwayinto eyaziwayo kwiqela labantu abasebenza ngaphakathi kwistudiyo esithile.